"पुरुष हुनुको घमण्ड" को अवधारणा habitually महिलाहरु तिर मानिसहरूको अन्याय मनोवृत्ति संकेत गर्न साधारण parlance प्रयोग गरिएको। किनभने को कि fairer सेक्स को धेरै तर्क विरुद्ध पूर्वाग्रह आफ्नो क्षमता मानिसहरूलाई तिनीहरूले पेसा गर्न वा गर्न सक्छन् आय को एक उच्च स्तर हासिल। यो जस्तै वा छैन? यो प्रश्नको जवाफ गर्न, हामीलाई पुरुषहरु सहित दुराग्रह को अवधारणा विचार र साँच्चै belittling यदि बुझ्न प्रयास गरौं महिला अधिकार आधुनिक समाजमा स्थान लिन्छ।
शब्दकोश अनुसार, यो अन्य मानिसहरूका विरुद्ध भेदभाव सफाइ गर्न अरूलाई भन्दा एक राष्ट्रको श्रेष्ठता यसको कोर दाबी मा छ जो दुराग्रह को विचारधारा, रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
Nikolya Shovena - यो घटना को नाम नेपोलियन Bonaparte एक सैनिक को नाम आउँछ। पौराणिक कथा अनुसार, सिपाहीहरूले पनि आफ्नो ढलाउनु पछि नेपोलियन वफादार रहिरहे र सम्राट छेउमा कुनै पनि मान्छे संग लड्न तयार थियो।
लिङ्ग दुराग्रह पनि sexism भनिन्छ जो जो पुरुष र महिला को unequal अधिकार द्वारा अनुमोदित छन् worldview रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
यो हरेक तल्ला कठोर निश्चित भन्ने तथ्यलाई मा प्रकट भएको छ सामाजिक भूमिकाको पुरुष र महिला मानिन्छ छन् कि चल्नै पर्छ।
बलियो - उदाहरणका लागि, एक महिला कमजोर हुनु पर्छ कि एक स्टेरियोप्रकार, र मानिस त्यहाँ छ। बैठक र भवन सम्बन्ध मानिस जब एउटा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न, र महिला मात्र घटना कसरी खोल्न, आशा गर्नुपर्छ। साथै, यो महिला ज्याला 10% नै अवस्था र दायित्व अन्तर्गत पुरुष ज्याला भन्दा कम हो कि विश्वास छ।
sexism को manifestations द्वारा कहिले काँही यस्तो पेनाल्टी विरुद्ध रूपमा, महिला लागू छैन भन्ने तथ्यलाई पनि समावेश मृत्यु दण्ड वा जीवन कैद। साथै, यस sexes को समानता लागि लडाकूको धेरै महिलाहरु उच्च औसत जीवन प्रत्याशा बावजुद, पुरुषहरु भन्दा पहिले रिटायर कि अपमानजनक छ।
निष्कर्षमा लिङ्ग असमानता भर जोड छ यी तथ्य देखि आएको सकिन्छ। मानिसहरू महिलाहरु भन्दा कुनै कम आफ्नो अधिकार मा slighted महसुस हुन सक्छ।
आजको समाजमा पुरुष दुराग्रह
पुरुष र महिला व्यवहार को माथि STEREOTYPES केवल संस्कृति मा तय नमूनाहरू छन्। परम्परा, विचारधारा र लक्ष्य, साथै तिनीहरूलाई हासिल गर्न तरिका परिवर्तन गर्नुहोस्। पछिल्लो शताब्दीमा कडे स्तर सम्पूर्ण दुवै sexes व्यवहारलाई द्वारा निर्धारित को सुरुमा भने, आधुनिक रूसी समाजमा, मान्छे एकदम अधिक स्वतन्त्रता यसको manifestations मा प्राप्त गरेका छौं। कुनै एक पुरुष (र कहिलेकाहीं तिनीहरूलाई भन्दा बढी सफल) संग तेल र ग्याँस उद्योग मा एक क्यारियर बनाउँछ जसले केटी, वा यस्तै जटिल द्वारा स्तब्ध छ।
धेरै महिलाहरु इन्कार परिवार मान अनुसन्धान र नयाँ विचार को पदोन्नति को पक्षमा। सधैं निष्पक्ष सेक्स को "sidelines" नेता मानिस निम्न छ।
यो पृष्ठभूमिमा, पुरुष हुनुको घमण्ड, वा महिला तिर "दोस्रो वर्ग" को रूपमा मनोवृत्ति विरुद्ध बिस्तारै पृष्ठभूमिमा मा हराउँछ।
निस्सन्देह, त्यहाँ अझै पनि एक महिला राम्रो नेता हुन सक्दैन, त्यो तर यस्तो टिप्पणी मात्र एक मुस्कान ल्याउन सक्छ भन्न जो मानिसहरू छन्। त्यहाँ एक महिला एक शानदार क्यारियर के गर्न सक्छ, र एक ठूलो उद्यम को टाउको मा खडा को उदाहरण धेरै छन्। तसर्थ, सीईओ र देश को सबै भन्दा ठूलो एयरलाइन्स को एक - एक महिला र उद्यम विशाल को कर्मचारीहरु को सबै भन्दा यसलाई साँचो आदर व्यवहार गर्छन्।
महिला प्रतियोगिता मा, मानिसहरू deprived र विपन्न महसुस गर्न थाल्छन्। धेरै मानिसहरू साँच्चै जब महिला श्रेष्ठता आइपर्दा समाजमा आफ्नो स्थान पाउन सक्दैन। तथाकथित पुरुष हुनुको घमण्ड यहाँ को कारण के हो? तरिका वरिष्ठ स्थितिहरु मा सक्रिय महिलाहरु बीच एक foothold पाउन एक प्रयास मा, बलियो सेक्स को केही सदस्यहरूले तिनीहरूलाई विरुद्ध कडा-मार बयान को मद्दतले प्राण हटाइएको छ। तर यो ध्यान लायक छ?
एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या हो भनेर सम्भव छ जो व्यक्ति नै अनुरूप छ भने मात्र एउटा सजिलो र खुसी जीवन, को सपना जो पुरुष र महिला। यो मुख्य प्रश्न हो - यदि मान्छे को पूर्ण समानता सुखी यो गर्न, बढी सफल धन्यवाद तिनीहरूले गर्नेछ या छैन। र थप महत्त्वपूर्ण छ जो बारेमा अन्य कुराकानी: एक मानिस वा एक महिला, बस ध्यान दिनुपर्छ छैन।
को रक्षक र breadwinner - को sexes को समानता को अवस्थामा बाँचिरहेका मान्छे, अक्सर एक महिलाले Homemaker, र एक मानिस हुँदा, परम्परागत मान फर्कन खोज्छन्। यो सही हो? प्रत्येक प्रश्नको गर्न, आजको संसारमा फाइदाको त्यहाँ या त दिशा मा आत्म-पूरा लागि संभावना छ जवाफ।
र, "पुरुष दुराग्रह" आहत भएका अन्य शब्दहरू मा महिला, तिनीहरूलाई विरुद्ध मानिसहरू unflattering कैफियत, म आफू र आफ्नो क्षमताहरु मा विश्वास गर्न सुझाव चाहन्छु। र त्यसपछि अन्य मानिसहरूको राय तपाईं एक क्यारियर बनाउन, र तपाईं सपना के सबै हासिल रोक्दैन।
मानसिक घटना को वर्गीकरण
के वर्ण मानिसलाई peculiar गुण
शान्त समुद्र होटल3* (भियतनाम, Nha Trang): कोठा, सेवा, को विवरण
यो ग्यारेज निजीकरण गर्न सम्भव छ? आवश्यक कागजात र प्रक्रिया: कसरी ग्यारेज निजीकरण गर्न
एसडीएस - लामो सङ्कुचन सिंड्रोम: लक्षण, उपचार र रोकथाम
कसरी "Maynkraft" कम्पास र कसरी प्रयोग गर्ने?
आफ्नो हातले एक्रिलिक मोल्डिंग